Suudaan: Dagaalada ka socda Galbeedka Darfur waxay kicinayaan tirada dhimashada ee sii kordheysa - Wardeeq 24 TV Suudaan: Dagaalada ka socda Galbeedka Darfur waxay kicinayaan tirada dhimashada ee sii kordheysa Wardeeq 24 TV
Home Xulashada Suudaan: Dagaalada ka socda Galbeedka Darfur waxay kicinayaan tirada dhimashada ee sii...
Suudaan: Dagaalada ka socda Galbeedka Darfur waxay kicinayaan tirada dhimashada ee sii kordheysa
Dhiiga daadinta ayaa ah kii ugu dambeeyay ee dib u soo cusboonaaday rabshadaha tan iyo markii la saxiixay heshiiskii nabada ee Juba bishii Oktoobar, isla markaana ciidamada nabad ilaalinta ee Qaramada Midoobay ay bilaabeen inay ka baxaan.
Rabshad ka dillaacay
Iska horimaadyada dhexmara qabiilooyinka Carabta iyo beelaha aan Carabtu ahayn ee Massalit ee magaalada Al Geneina, Galbeedka Darfur, ayaa bilaabmay bartamihii bishii Janaayo, taasoo horseedday boqolaal dhaawacyo ah, sida ay sheegtay Qaramada Midoobay.
Qiyaastii 108,000 oo dad horey u barakacay ah ayaa laga saaray xeryaha Krinding, ee ku yaal caasimada gobolka Darfur Galbeed.
Fiidnimadii Sabtida, dabley aan la garanayn ayaa toogtay qabiilooyin Massalit ah oo kusii jeeday Al Geneina, halkaas oo ay ku dileen laba ayna ku dhaawaceen laba kale. Xiisadaha udhaxeeya labadooda ayaa si dhaqso leh usii kordhay iskudhacyada rabshadaha ahna waxay bilaabeen
Ilaa hadda, UN-ku waxay sheegeen in 56 qof la dilay, 58 la dhaawacay, kumaankunna ay ka barakaceen guryahooda.
Sidoo kale waxaa jiray warbixino sheegaya in la weeraro dad rayid ah oo ay ku jiraan haween iyo caruur iyo sidoo kale xarumaha samafalka.
Si loo xakameeyo xaaladda, shalay, Golaha Amniga iyo Difaaca ee dalka waxay ku dhawaaqeen xaalad Degdeg ah.
Wakiilka Gaarka ah ee Qaramada Midoobay, VolkerPerthes, ayaa soo dhoweeyay tallaabada wuxuuna ku booriyay ciidamada amniga ee dowladda inay ka hortagaan rabshado hor leh oo ay soo celiyaan kala dambeynta.
Waxa uu xusay in loo baahan yahay in loo arko inay ku dhaqmayaan danta nabadda iyo inay ilaaliyaan dhammaan dadka rayidka ah, iyagoo si buuxda ugu hoggaansamaya heerarka caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha iyo iyada oo aan loo helin daaweyn gaar ah oo ku saleysan qabyaaladda ama isirka.
“Waxaan ka codsanayaa dhamaan dhinacyada in ay si deg deg ah u joojiyaan dagaalka waxaana ugu baaqayaa Dowlada in ay hubiso amaanka iyo marin u helida ururada samafalka ee u adeegaya dadka ay dhibaatadu saameysey” ayuu yiri Mr. Perthes. “Dowladdu waa inay baarto oo ay la xisaabtanto kuwa mas’uulka ka ah rabshadaha”.
UN waxay garab taagan tahay Suudaan
Sarkaalka Qaramada Midoobay wuxuu u gudbiyay Ra’iisul Wasaaraha, xubnaha dowladda, iyo kuwa kale ee u heellan heshiiskii nabadda ee Juba, in UN-ka iyo la-hawlgalayaasheeda bani’aadamnimadu ay abaabulayaan shaqaale dheeraad ah iyo ilo dhaqaale si ay uga jawaabaan barakaca iyo baahiyaha bani’aadamnimo ee sii kordhaya ee ka socda wareegan ugu dambeeyay ee rabshadaha.
“UN-ka waxaa ka go’an inay taageerto dowladda Suudaan si ay u gudato waajibaadkeeda ka saaran ilaalinta shacabka iyo wax ka qabashada sababaha keenaya rabshadaha socda”, ayuu yiri.
Wakiilka Gaarka ah wuxuu u tacsiyeeyay qoysaska dhibanayaasha wuxuuna u rajeeyay caafimaad deg deg ah kuwa dhaawacmay.
Previous articleTirada dhimashada ayaa ka kacday dagaalada ka socda Galbeedka Darfur ee Suudaan: UN
Next articleSiyaasadda, amniga, xuquuqda aadanaha iyo caqabadaha bani’aadamnimo ’ayaa ku habsaday Mali